သတ်သတ်လွတ်ဟင်းများ | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
အသားစားလို့ညည်းလာရင် သတ်သတ်လွတ်ဟင်းများ ကို အရသာရှိရှိစားနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါတယ် ကုသိုယ်လဲရ ဝမ်းလဲဝပေါ့နော်
ဒါလေးက ကျမ အလွန်ကြိုက်သော သတ်သတ်လွတ်ဟင်းလေးပေါ့ ၊သက်သတ်လွတ် စားလို့မဟုတ်ပဲ ကြိုက်လို့ကိုချက်စားဖြစ်တာပါ။ တချို့က မေးကြပါတယ်။ သက်သတ်လွတ်လဲပြောသေး ဘဲသား ကြက်သားလဲ ခေါ်သေးပေါ့နော် ကျမ ဉာဏ်မှီသလောက်ပြောရရင်တော့ အရသာကိုသာ တူအောင်လုပ်ထားတာပါ တကယ်က ပဲနဲ့ လုပ်ထားတာမို့ အသက် သတ်တာနဲ့ မဆိုင်ဘူးလားလို့ပါ။ ဒါကြီးကတော့ ဘဲသားအစစ်ဟဲ့ ကြက်သား အစစ်ဟဲ့လို့ မမှတ်ပဲ စားရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘဲသားအရသာဆို ချိုငံလေး ကြက်သားဆိုခပ်လေးလေး ပုဇွန်ဆို ချိုအောင် စသည်ဖြင့်လုပ်ထားကြတာပါ။ ကျမ အတွေးသတ်သတ်သာဖြစ်လို့ အတွေးများမှားနေခဲ့ရင် တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျမ အလွန်ကြိုက်သော ဟင်းတခွက်ကို စေတနာဖြင့် ရေးပေးချင်သော စိတ်တခုဖြင့်သာ ရေးသားမိပါတယ်လို့
-အသားတု ဘဲသား ဗူး ၂ဘူး 300 g
-ကြက်သွန်နီ အလတ် ၁လုံး
-korea ငရုတ်သီး အနှစ် ၁ဇွန်း (စားပွဲတင်)
-သကြား ၁ဇွန်း (အချိုဇွန်း)
ကြက်သွန်များကို ရောပြီး ကျေညက်နေအောင် ကြိတ်ပေးထားပါ။ အကယ်လို့ korea ငရုတ်သီး အနှစ်များ မရှိရင် အနှစ်အစား ကို ငရုတ်သီးအကြမ်းဖတ် ၂ဇွန်း(စားပွဲတင်) ထဲ့ပြီး ရောကြိတ်လိုက်ပါ။
ဆီပူပူမှာ ကြက်သွန်အရောကို ရွှေဝါရောင်သန်းသည်အထိကြော်ပေးပါ ။ ကြက်သွန် ကျွတ်လာရင် ငရုတ်နှစ် ထဲ့ပြီး ရောမွှေပေးပါ။
အသားတုဘူးဖောက်ပြီးရောပေးနိုင်ပါပြီ။ ရေ အနဲငယ်ထပ်ဖြည့်ပြီး ပွက်လာရင် သကြား၊ ပဲငံပြာရည်၊ ဆားတို့ကို ထဲ့ ၇ မိနစ်ခန့် အဖုံးအုပ်ပေးပါ။
ဆီပြန်လာရင် အရသာ အပေါ့အငံ မြည်းကာ တရုတ်မဆလာ ဖြူးပြီး ထမင်းပူပူလေးနဲ့ အရသာရှိရှိစားသုံးနိုင်ပါပြီရှင်။
By eithet • Posted in သတ်သတ်လွတ်ဟင်းများ
မကျည်းသီးနုနုတွေ တွေ့တော့ ခပ်စပ်စပ်လေး ထောင်းစားချင်လာပါတယ်။ စားလို့ကုန်တာကြာနေပေမဲ့ မအားလို့ဒီရက်ပိုင်း blog လေးကိုပစ်ထားတာကြာပြီမို့ ဒီနေ့ ဒါလေးကို သတိတရတင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထမင်းမြိန်စေမဲ့ ဒီမကျည်းသီးထောင်လေးက အညာထောင်လေးပါနော်။ ကြည့်ရအောင်
မကျည်းသီးလေးများကိုရေစင်စင် ဆေးပြီးထောင်းပါ။ ထောင်းနေရင် မညက်တညက်အချိန်မှာ ငရုတ်သီးစိမ်းလေးများ အညှာခြွေထဲ့၊ ကြက်သွန်ဖြူ လေးများထဲ့ထောင်းပါ။ ဆားကို ထောင်းနေရင် နဲနဲထဲ့သွားပါ။
တော်တော်လေး ညက်ပြီဆိုရင် ငပိမီးသင်းထားတာလေးထဲ့ရောထောင်းပါ။ အားလုံး ညက်ပြီဆိုရင်ထမင်းမြိန်စေမဲ့ မကျည်းသီးထောင်းလေးရပါပြီ။
By eithet • Posted in သတ်သတ်လွတ်ဟင်းများ, အရံဟင်းလျာများ, မြန်မာဟင်းလျာများ
ခရမ်းဘုတ်မသီးကြီးတွေ မီးဖုတ်ပြီးသုတ်စား စား၊ ကြက်ဥလေးနဲ့ကြော်စား စား အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသားက ကြက်ဥနဲ့ကြော်တာလေးပိုကြိုက်ပေမဲ့လို့ တခါတလေ ကိုယ့်အာသာလေးပိုဦးစားပေး ဦးမှဆိုပြီးသုတ်စားပါတယ်.။ အားလုံးလုပ်စားတတ်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်နော်။ အိသက် Blog လေးမှာ တစုတစည်းတည်းဖြစ်စေချင်လို့တင်လိုက်တာပါ။ စိမ့်ပြီးအရသာကိုရှိနေတာပဲ။ သတ်သက်လွတ်ဟင်းတခွက်ပါပဲနော်။
-ကြက်သွန်ဖြူ ၄မွှာ ပါးပါးလှီးထားပါ
ခရမ်းသီးများကို Oven ထဲ ထဲ့ပြီးမီးဖုတ်လိုက်ပါ။ မိနစ်၂၀အကြာ မွှေးလာပြီး ခရင်းနဲ့ထိုးကြည့်လို့အိနေပြီဆိုရင်ရပါပြီ။
ခရမ်းသီးများ အခွံခွါပြီး အနှစ်များယူပါ။ ဇလုံ၁ခုထဲ မှာထဲ့ပြီး ဆီစိမ်း၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၄မွှာ ပါးပါးလှီးထားတာထဲ့ ( ခရမ်းသီးက လေထိုးတတ်လို့ကြက်သွန်ဖြူ များများထဲ့ပါတယ်)။
အားလုံးရောမွှေပြီး နံနံပင် ဖြူးကာ စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
ဒီဟင်းလေးကို သားသား ငယ်ငယ်ကလန်ဒန်မှာ၆လလောက်အတူလာနေပေးသွားတဲ့အမနှစ်ဝမ်းကွဲ မတင်တင်မိုးကချက်ပြသွားတာပါ။ အမေ့တူမတဝမ်းကွဲပါ။ အဲဒီ မကြီးတင်တင်မိုးက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝမှာတည်းက အိသက်အမေ လှည်းတန်း အောင်ချမ်းသာလမ်းထဲမှာ ၁၉၈၆ခုနှစ်ဓနုဖြူဆိုင်ခွဲစဖွင့်တည်းက သူ့အမ မလှမိုးနဲ့အတူ ဒိုးတူဘောင်ဖက် အမေ့ကိုကူခဲ့ကြတာပါ။ အမေ့လက်ကျမို့ အိသက်တို့ သမီးအရင်းတွေထက်ဟင်းချက်ကောင်းပြီး အမေ့လက်ရာ တပုံစံတည်းထွက်ပါတယ်။ သူရှိတုန်းကမုန့်မျိုးစုံလဲစားရပါတယ်။ မုန့်ဘိုင်းတောင့် လေးညနေခင်းလုပ်ကျွေးတာသတိရမိတယ်။ စားကလဲစားချင် လုပ်ရမှာလဲပျင်းဆိုတော့ သူများလုပ်ကျွေးတာသတိရနေတာပေါ့လေ။ သူချက်တဲ့ဟင်းတွေထဲမှာ ဒီမှိုဟင်းအစပ်အကြိုက်ဆုံး၊ ဒါပေမဲ့ အိသက်က seafoodတို့ မှို တို့နဲ့သိပ်မတဲ့ဘူး။ စားပြီးရင်၂ရက်လောက် လက်ခလယ်ရဲ့လက်စစ်လေးတွေ ရောင်ပြီးယားလာရော။ အဲဒီထက်တော့ပိုမဖြစ်တတ်ဘူး။ အိသက်မမလေးလဲ အဲဒီလို Allergic reaction ရှိတယ် သူကပြောဖူးတယ် သေလောက်အောင်ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူး စားတဲ့၊ ခုစားပြီး နဲနဲတော့ ဂစ်တာတီးရတာပေါ့နော်။ အရမ်းကြိုက်တဲ့အတွက် စားရတာတန်တယ်လို့ မှတ်ပါတယ်။သက်သတ်လွတ်ဟင်းလဲဖြစ်ပါတယ်.
My second cousin, Ma Tin Tin Moe cooked this button Mushroom Curry for us when she was living in London for6months to look after my newly born son. In 1986, my mum opened upaDanuphu’s branch in Aung Chan Tha Street where my second cousin worked with her elder sister as comrades for my mum while she was studying in Uni. So she was trained properly by my mum and she can cook better than us, the daughters understandably. We were spoiled with many Burmese snacks made by her while she was here. I kind of recall the evenings when we were treated with Mote-bine-dount (small long dices of rice based snacks). I can only remember these golden time as I am not up for cooking. Many of her dishes, I love this spicy mushroom curry the most. But I am allergic to seafood and mushroom. Two days after I had them, time for scratching around my fingers but never worse than that so I was recommended to eat more as I am not gonna die as the philosophy goes from my elder sister who has the same allergic reaction. It isalittle price I am willing to pay for, for I like it so much. And it is alsoavegetarian dish.
-ကြယ်သီးမှို ၂၀၀ ဂရမ်(ထက်ခြမ်းခြမ်းထားပါ)
-ကြက်သွန်နီ ၁လုံး(အတုံးလေးများလှီးထား)၊ ဖြူ ၃မွှာ
-200g Slice the button mushrooms in half
-1 onion (slice into small dices),3pieces of garlic
-1 tbl spoon of crushed dry chilli
-1 tbl spoon of curry powder
-3 small slices of green chilli
-2 tomatoes, slice it up
-a bit of salt and2tbl spoons of chicken powder
ကြက်သွန်နီ ၁လုံး(အတုံးလေးများလှီးထား)၊ ဖြူ ၃မွှာ တို့ကို ငရုတ်သီးလှော်မှုန့် ၁ဇွန်း၊ အရောင်တင်မှုန့်၁ဇွန်းနဲ့ဆီသတ်ပြီးခရမ်းချဉ်သီး၂လုံး လေးစိတ်လှီးထားတာထဲ့ပါ။
1 onion of sliced dices,3pieces of garlic are mixed with 1 tbl spoon of crushed dry chilli, 1 tbl spoon of curry powder and add them intoasimmering oil and top with already sliced tomatoes.
ငရုတ်သီးစိမ်း၃တောင့်ပါးပါးလှီးထားတာများနဲ့ ဆားနဲနဲ၊ ကြက်သားမှုန့်၂ဇွန်း(စားပွဲတင်)ရောပါ။ နောက်ဆုံးမှ ကြယ်သီးမှို လေးများထဲ့ပါ။
3 thinly sliced green chilli withabit of salt and chicken powder are to put in and add the button mushrooms at the last stage.
Add the water to level up the contents and cover the pot withalid. Once you see the changes in colour and oil would surface it then it’s ready. A Spicy Button Mushroom Curry is very good.
2012 Valentine day ရဲ့ သီးစုံ ထောပတ်ထမင်းကြော်လေးပါ၊ လုပ်ရတာ လွယ်ပြီးစားလို့လဲကောင်းပါတယ်နော်၊ ပြီးတော့ သက်သက်လွတ်အနေလဲစားလို့ရပါတယ်၊ အိသက်ကတော့ ကြက်ဥကြော်နဲ့ ဝက်ဥချောင်းကြော်လေးထဲ့ထားတာပါ။ သတ်သတ်လွတ် အနေနဲ့မစားပါဖြစ်လို့ပါ၊
– သီးစုံ အတုံးလေးများ ( မုန်လာဥနီ၊ ပြောင်းဖူး၊ ပဲစိမ်းသီး )
– သီဟိုဠ်စေ့( ကြော်ပြီးသား )
– ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ငရုတ်ကောင်း
ပထမဦးဆုံး ထောပတ်ကိုထဲ့ပြီး သီးစုံကိုကြော်ပါ၊ သီးစုံကြော်ထဲကို ထမင်းရောပြီးထပ်ကြော်ပါ၊
သီဟိုဠ်စေ့( ကြော်ပြီးသား ) နဲ့ စပျစ်သီးခြောက် . ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ တို့ကိုနှံ့အောင် မွှေပေးပါ၊ငရုတ်ကောင်းလေးဖြူးပေးပြီးရင် ရပါပြီ။
ဒီဟင်းလေးကစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ အတော်အရသာရှိပါတယ် ၊ အချဉ်ဓာတ်လေး အစပ်လေးပါ ပါတဲ့အတွတ် မအီပဲအလွန်းကောင်းပါတယ်.သတ်သတ်လွတ်ဟင်းတခွက်လဲဖြစ်ပါတယ်
– နို့ခဲအရည် ( စစ်ထားတဲ့အရည် )
-ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်
နွားနို့ခဲအတုံးလေးများကို ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ပဲငပိ ငရုတ်သီးကြော်တစ်ဇွန်းတို့နဲ့နယ်ထားပါ၊
ထုံးစံအတိုင်း ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ ကို ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ အရောင်တင်မှုန့် တို့နဲ့ ဆီသတ်ပါတယ်၊
ရွှေဝါရောင်သန်းလာပြီဆိုရင် ခရမ်းချဉ်သီးထဲ့ပြီး အသာလေးမွှေပေးပါ.ခရမ်းချဉ်သီးနွမ်းလာရင် နယ်ထားတဲ့ နွားနို့ခဲလေးတွေထည့်၊ ဆား၊ အချိုမှုန့် သင့်သလိုထည့်ပြီး နို့ခဲအရည် ( စစ်ထားတဲ့အရည် ) လောင်းထဲ့ပြီး ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေထဲ့ပြီးနှပ်ထားလိုက်ပါ။ ဆီပြန်လာပြီဆိုရင် နွားနို့ ခဲဟင်း စပ်စပ်လေး နဲ့ စိမ့်စိမ့်လေးရပါပြီ
ပုံမှန်ပြောင်ဖူးကို ဒီအတိုင်းကြော်စားကြပါတယ် ။ နွားနို့ လေးနဲ့ဆိုတော့ စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ စားလို့ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်၊၊ အိသက်တို့Htetfamily မိသားစုကပ်သမျှ ဘုန်းကြီးဝိုင်းတိုင်း မပါမဖြစ်ပါရတဲ့ ဟင်းပွဲလေးပါ။ အိမ်ရှင်မများလဲနှစ်ခြိုက်မဲ့ဟင်း တခွက်မို့မြည်းကြည့်စေချင်ပါတယ်နော်။
-ကြက်သွန်နီ၁လုံး၊ ဖြူ ၃မွာ
-နွားနို့ မတ်ခွက်၁ ဝက်စာ
စက်နဲ့ကြိတ်တယ် ထောင်းတယ်ဆိုတာ စီးစေချင်လို့ပါ
ပထမဆုံး ပြောင်းဖူးကို စက်နဲ့ကြိတ်လိုက်တယ် ပုံမှန်ရန်ကုန်မှာဆိုထောင်းတာပေါ့နော် ဒီမှာတော့မြန်အောင်လို့စက်သုံးလိုက်တယ်၊ စက်နဲ့ကြိတ်တယ် ထောင်းတယ်ဆိုတာ စီးစေချင်လို့ပါနော်
ပြီးရင်ကြက်သွန်နီ၊ ဖြူ ဆီသတ်
ကြက်သွန်နီ၊ ဖြူ ရွှေဝါရောင်သန်းလာရင် ပြောင်းဖူးကိုထဲ့ပါ
ပြီးရင်-နွားနို့နဲနဲ ၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်ထဲ့မွှေပြီး အဖုံးခဏအုပ်ပါ . ပြောင်းဖူးနူးပြီး စေးလာပြီဆိုရင်ရပါပြီ
အလွန်အရသာရှိတဲ့ ပြောင်းဖူးကြော်စီးစီးစိမ့်စိမ့်လေးရပါပြီ. ကြက်သွန်နီကြော်ကျွပ်ကျွပ်လေးဖြူးပြီး ထမင်းပူပူလေးနဲ့စားရင်အလွန်မြိန်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်စိတ်နှလုံး ရွှင်ပြုံးနိုင်ကြပါစေ။